Soo dejisan TuneFab Spotify Music Converter 2.8.3 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaTuneFab Spotify Music Converter
Bogga rasmiga ah: TuneFab Spotify Music Converter
TuneFab Spotify Music Converter – oo ah barnaamij looga gudbo DRM oo ay Spotify u isticmaasho si ay u ilaaliso waxyaabaha kujira dhijitaalka. Teknolojiyadani waxay ka hortageysaa nuqulada muusikada la soo iibsaday iyo ku ciyaarista aaladaha kale. TuneFab Spotify Music Converter wuxuu u rogayaa track kasta ama liistada qaab kale oo maqal ah waxayna ku soo dejisan kartaa kumbuyuutar aan lahayn DRM, kaasoo kuu oggolaanaya inaad dhageysato muusikada tooska ah. Kahor intaadan bilaabin hawsha beddelka, softiweerku wuxuu awood kuu siinayaa inaad bedesho cabirrada dhawaaqa aasaasiga ah ee faylasha wax soo saarka, kuwaas oo ah qaabka faylka wax soo saarka, saamiga saamiga, iyo qallajiska. TuneFab Spotify Music Converter wuxuu taageerayaa dardargelinta 5x ee beddelka iyo soo dejinta tareenka iyada oo aan luminin tayo sidoo kale wuxuu keydiyaa asalka aqoonsiga ID3 iyo metadata kale, sida magaca farshaxanka, farshaxanka albumka, magaca orodka, iyo mudadiisa.
U beddelashada dariiqyada qaabab maqal oo caan ah
5x dardargelinta beddelka iyo soo dejinta nidaamka
Abaabulka cabirrada dhawaaqa aasaasiga ah ee faylalka wax soo saarka
Kaydinta astaamaha ID3-ka ah iyo metadata kale
Soo dejisan TuneFab Spotify Music Converter
Faallo ku saabsan TuneFab Spotify Music Converter
TuneFab Spotify Music Converter Xirfadaha la xiriira
HTC Sync – waa softiweer ay ku wada shaqeeyaan xogta udhaxeysa qalabka HTC iyo kumbuyuutarka. Waxay taageertaa casriyeynta tooska ah ee wadayaasha qalabka.
software The inuu ka soo kabsado xogta on, iPhone iPod iyo iPad. software waa ay awoodaan in ay soo kabsadaan xogta lumay ka hayaan iTunes iyo iCloud.